Haweenay fool ahayd oo is dishay oo dadka Shiinuhu ka caroodeen - BBC News Somali
Haweenay fool ahayd oo is dishay oo dadka Shiinuhu ka caroodeen
Lahaanshaha sawirka SEAN GALLAGHER
Dadka Shiinaha ee adeegsada baraha bulshada ee internet-ka ayey naxdin iyo anfariir ku noqotay haweenay xaamilo ahayd oo is dishay, oo sida wararku sheegayaan qoyskeedu u diideen in ay qaliin ilmaha lagaga dhalinayo gasho.
Haweenayda oo 26 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Ma, ayaa iska soo tuurtay daaqada cisbitaal fooq ah oo ku yaal gobolka woqooyi ee Shaanxi 31 bishii August, waxaana halkaa ku qudh baxay iyada iyo ilmihii ay sidday.
Huo Junwei oo ah dhakhtar ka tirsan Cisbitaalka Yulin ayaa wargeyska Shiinaha ka soo baxa ee China Economic Daily u sheegay in Ma "ay waadhka laba goor ka baxday oo ay qoyskeeda u sheegtay in xanuunka fooshee hayay aanay u adkaysan karayn oo ay doonaysay in ilamaha lagu soo qalo laakiin qoyskeedu ay u sheegeen in aanay aqbali karin in la qalo".
Ninka ay u dhaxday oo magaciisa la yidha Yan ayaa beeniyey arintaa dhakhtarku sheegay, waxaanu wargayska Beijing Youth Daily ku yidhi "umaanu diidin in ilmaha lagu qalo".
Warbixin cisbitaalku soo saaray ayaa sheegtay in Ma oo sidkeedu ahaa 41 todobaad iyo dhakhaatiirtu isku raaceen in "maadaama oo ilmaha ay sidday weynaa ay halis ku geli karto hadii ay habka dabiiciga ah ku dhasho"
Cisbitaalku wuxuu intaa ku daray in markii shaqaalaha caafimaadku qoyska haweenayda ka dalbadeen in ay u saxeexaan in la qalo "qoysku u sheegay in ay halista jirta garawsadeen laakiin ay diidanyihiin in gabadha la qalo oo ay doonayaan in muddo xaaladeeda lala socdo oo la baxnaaniyo". Warbixintani wax intaa ka badan oo faahfaahina may bixinin oo ku saabsan xubnaha qoyska Ma ee arintan laga soo weriyey.
Yan ayaa isna xaqiijiyey in afadiisu waadhka ka baxday laba goor iyadoo xanuunka fooshu hayo. Waxaanu sheegay in xaaladdii ay ku jirtay qudhiisa walbahaar ku abauurtay oo uu dakhtarkii joogay ku jidhi "qof qaliinkan garanaya u raadi".
Wuxu yidhi isaga oo telefoon ku hadlaya, ayuun baa markuu ka soo jeedsaday waayay ba meel ay jaan iyo cidhib dhigtay xaaskiisii "waan ogaa xaalada afadaydu ku sugnayd, laakiin meeshaba ma soo dhigan daaqaday iska tuuri", ayuu ku daray hadalkaa uu u sheegay wargeyska.
Sharciga Shiinuhu wuxu dhigayaa in shaqaalaha caafimaadku marka hore ay ogolaansho waydiistaan ehelka qofka bukaanka ah inta aanay ku samaynin qaliinada waawayn.
Lahaanshaha sawirka SHANNON FAGAN
Laakiin dadka adeegsada baraha bulshada ee internet-ka ayaa is weydiinaya sababta loogu ogolaan waayey Ma in ay iyada qudheedu go'aan ka gaadho nafteeda.
Qof cinwaankiisu yahay FreedomMarciaLeyan ayaa qoray "haweenayda xaamilada ahi iyadaa xaaladeeda oge maxaa loo aqbali waayey in ay iyadu saxeexdo ogolaanshaha qaliinka ay ku gelayso" waxaana u riyaaqay hadalkaa 10,000 oo qof
Wuli Laotiaotiao isna wuxu qoray "qoyskaa waa in loo garawsadaa in ay gacan ku dhiigle yaal yihiin" waxaana isna hadalkaa raaciyey sidan "waa in kiiskaa lagu xukumaa" Liuxingo
Jinling_xiaoxiao_sheng ayaa si jeesjees ah u yidhi "waa wax loo riyaaqo in bukaanka Shiinuhu aanay xaqba u lahayn in ay go'aan gaadhaan".
Waa markii u horraysay ee shacabku aad uga wada cadhoodaan hanaanka xafiisyada ee Shiinaha ee aan xorriyadda siinin shacabka si ay go'aan uga gaadhaan xaaladaha caafimaad ee ay ku suganyihiin.
In kasta oo ninkii ku guulaystay abaal marinta nabadda ee Nobel ee Liu Xiaobo lagu sii daayey duruufo caafimaad darteed maadaama oo uu qabay kansarka ku dhaca beerka oo uu aakhirkiina u dhintay, ayaa hadana loo diiday in uu daryeel caafimaad ka doonto dalka dibadiisa, taas oo la sheego in ay marag u tahay hanaankan kakan.
Qaliinka haweenka lagu qalo caruurta ayaa Shiinaha aad looga jecelyahay maadaama oo loo arko inuu yahay mid halis badan aan lahayn oo ka xanuun yar foosha badan ee ay haweenku sida dabiiciga ah ugu umulaan. Laakiin markii la laalay siyaasaddii ahayd in qosy waliba dhalo ilmo keliya 2015-kii ayaa wax iska bedeleen fikirkii dadka.
Warbaahinta dawladda ayaa haatan si toosa ugu dhiiri gelisa waalidka in ay ilmo labaad dhalaan, haweenkana waxa lagu guubaabiyaa in aanay ku degdegin qaliinka.
"Haweenku waa in ay ka fiirsadaan oo aanay ku degdegin qaliinka marka ay curadda yihiin maadaama oo ay arintaasi saamayn taban ku yeelan doonto hadii ay uur labaad qaadaan" ayuu yidhi Mao Qun'an oo ka tirsan wakaaladda Caafimaadka Qaranka iyo Qorshaynta Qoyska oo la hadlay wargeyska Financial Times sanadkii 2016-kii.
Qaliinku khatar aan sidaa u sii ridnayn ayuu dheeryahay habka dabiiciga ah ee dhalmada waxaanu keeni karaa in ilmagaleenku dilaaco ama in hadii haweenaydu uur kale qaado madheertu gaabato oo taasina khatar ku noqon karto ilmaha dambe ee haweenaydu qaaddo.